Imvamisa uzongithola kuzingxoxo-mpikiswano ezinkulu kwi-intanethi nganoma yini ehlobene nezepolitiki, inkolo nobungxiwankulu… zonke izinkinobho ezivuthayo abantu abaningi abazigwemayo. Kungakho nginezindawo ezizimele nezibhalwe uphawu kumithombo yezokuxhumana. Uma ufuna ukumaketha kuphela, landela umkhiqizo. Uma ungifuna, ngilandele… kodwa qaphela… uthola konke kimi. Ngenkathi ngingu-capitalist ongenamahloni, nami nginenhliziyo enkulu. Ngikholwa ukuthi kufanele sisize eyodwa